Jasmine Jasmine, Author at Mckzone Daily
Author: Jasmine Jasmine
ပုံမှန်ဝတ်စုံတွေနဲ့မတူဘဲ ပေါ့ပါးတဲ့ကြွေထည်တွေကိုအသုံးပြုကာ ဂန္တဝင်ဆန်တဲ့ဝတ်စုံတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲဖန်တီးပြခဲ့သူ
Candy Makeup Artist လို့လူသိများတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် self studyလုပ်နေတဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိတ်ကပ်ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သလို stylistတစ်ဦးလဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာ ပုံမှန်အဝတ်အစားတွေဖန်တီးရတာ ငြီးငွေ့လာပြီး သူမကိုယ့်သူမနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ အမြဲနှိုးဆော်နေတတ်သူဖြစ်တာကြောင့် ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ သူမဟာသူမရဲ့ကြွေထည်၊ဖန်ထည်တွေနဲ့ပြုလုပ်ဖန်တီးထားတဲ့ဝတ်စုံအချို့ကို ထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဝတ်စုံတွေဟာ ပေါ့ပါးတဲ့ကြွေထည်တွေနဲ့ဖန်တီးထားပေမဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားလည်း အတိအကျတိုင်းမှ ဝတ်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဝတ်စုံတစ်စုံရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကို အချိန်၃ပတ်လောက်အထိ အချိန်ယူခဲ့ရပါတယ်။သူမရဲ့ကြွေထည်ဝတ်စုံတွေဟာ ရောဂါကာလအတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ Bodypainting Festival ပွဲမှာ ပထမဆု ရခဲ့ပြီး သူမက အကယ်လို့ကမ္ဘာကြီးပြန်ကျန်းမာလာရင် Rihanna ဒါမှမဟုတ် Lady Gaga တို့က သူမရဲ့ဝတ်စုံတွေထဲကတစ်စုံကို ဝတ်ကြဖို့ မျှော်လင့်နေယုံဘဲ ကျန်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါသေးတယ်။
Candy Makeup Artist လို့လူသိမြားတဲ့အမြိုးသမီးတဈဦးဟာ ကိုယျ့ကိုကိုယျ self studyလုပျနတေဲ့ပရျောဖကျရှငျနယျမိတျကပျပညာရှငျတဈဦးဖွဈသလို stylistတဈဦးလဲဖွဈပါတယျ။သူမဟာ ပုံမှနျအဝတျအစားတှဖေနျတီးရတာ ငွီးငှလေ့ာပွီး သူမကိုယျ့သူမနောကျတဈဆငျ့တကျဖို့ အမွဲနှိုးဆျောနတေတျသူဖွဈတာကွောငျ့ ဒီတဈခေါကျမှာတော့ သူမဟာသူမရဲ့ကွှထေညျ၊ဖနျထညျတှနေဲ့ပွုလုပျဖနျတီးထားတဲ့ဝတျစုံအခြို့ကို ထုတျပွခဲ့ပါတယျ။အဆိုပါဝတျစုံတှဟော ပေါ့ပါးတဲ့ကွှထေညျတှနေဲ့ဖနျတီးထားပမေဲ့ ခန်ဓာကိုယျအရှယျအစားလညျး အတိအကတြိုငျးမှ ဝတျဆငျနိုငျမှာဖွဈပွီး ဝတျစုံတဈစုံရဲ့အစိတျအပိုငျးတဈခုခငျြးစီကို အခြိနျ၃ပတျလောကျအထိ အခြိနျယူခဲ့ရပါတယျ။သူမရဲ့ကွှထေညျဝတျစုံတှဟော ရောဂါကာလအတှငျး ပွုလုပျခဲ့တဲ့ ကမ်ဘာ့ Bodypainting Festival ပှဲမှာ ပထမဆု ရခဲ့ပွီး သူမက အကယျလို့ကမ်ဘာကွီးပွနျကနျြးမာလာရငျ Rihanna ဒါမှမဟုတျ Lady Gaga တို့က သူမရဲ့ဝတျစုံတှထေဲကတဈစုံကို ဝတျကွဖို့ မြှျောလငျ့နယေုံဘဲ ကနျြတယျလို့လညျးဆိုထားပါသေးတယျ။
Posted on November 26, 2020 November 26, 2020 Author Jasmine JasmineCategories ENTERTAINMENTLeaveacomment on ပုံမှန်ဝတ်စုံတွေနဲ့မတူဘဲ ပေါ့ပါးတဲ့ကြွေထည်တွေကိုအသုံးပြုကာ ဂန္တဝင်ဆန်တဲ့ဝတ်စုံတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲဖန်တီးပြခဲ့သူ
Ghost Rider ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲကလို ဆိုင်ကယ်ကိုမီးရှို့ပစ်ပြီး လက်တွေ့မောင်းနှင်ပြခဲ့တဲ့ အမျိုးသား (ရုပ်သံ)
၂၀၀၇ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Gost Rider ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုတော့ ကြည့်ဖူးကြမှာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ Mr. India Hacker အမည်ရှိ YouTuber အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ Ghost Rider ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုအတုခိုးပြီး မကြောက်မလန့်နဲ့ သူ့ရဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်အား တမင် မီးလောင်အောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဟာ likes ၅၀၀,၀၀၀ ကျော်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ အန္တရာယ်များတဲ့ သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုမကြိုက်တဲ့လူအရေအတွက်လည်း ၁၆၀၀၀ ကျော်တိုးများလာခဲ့ပါတယ်။ဒီ YouTuber ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Ghost Rider ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲက Nicholas အဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကောင်ကို ပြန်လည်တုပထားတာပါ။
Nicholas ဟာလူ့အရိုးစုတစ်စုရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ မီးလောင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် မီးလောင်နေတဲ့ ဂန္ထဝင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကို စီးနင်းခဲ့တာပါ။Mr. Indian Hacker ဟာ တန်ဖိုးကြီးပေးရလောက်မယ့် သူ့ရဲ့Pulsar 220 မော်တော်ဆိုင်ကယ်ရဲ့ဘီးတာယာကို အဝတ်စနဲ့ပတ်ပြီး အဝတ်စကိုဓာတ်ဆီတွေလောင်းချပစ်ခဲ့ပါတယ်။သူ ဆိုင်ကယ်မောင်းနေစဉ်အတွင်း Ghost Rider ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း တကယ်လည်း သူ့ရဲ့ဆိုင်ကယ်ဘီးမှာ မီးတွေတဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်နေခဲ့ပါတယ်။
Mr. Indian Hacker ဟာ သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုဟာ ဖျော်ဖြေဖို့သက်သက်သာရည်ရွယ်ပြီး ဒီဗီဒီယိုလုပ်ဆောင်မှုအားလုံးက လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာ၊ပြီးပြည့်စုံတဲ့စက်ကိရိယာတွေနဲ့သာပြုလုပ်ထားကြောင်း သတိပေး​ခဲ့ပါတယ်။Mr. Indian Hacker က အိမ်၊ကျောင်း ဒါမှမဟုတ် အခြားဘယ်နေရာမှာမဆို သူ့လို Ghost Rider ကိုလိုက်မတုပဖို့ လူအများကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီဗီဒီယိုရိုက်ကူးနေတုန်း ဘယ်သူမှထိခိုက်ဒဏ်ရာမရရှိခဲ့ဘူးလို့ Mr. Indian Hacker ကထပ်မံဖြေကြားခဲ့ပါသေးတယ်။
၂၀၀၇ ခုနှဈက ထှကျရှိခဲ့တဲ့နာမညျကွီးရုပျရှငျဇာတျကားတဈခုဖွဈတဲ့ Gost Rider ရုပျရှငျဇာတျကားကိုတော့ ကွညျ့ဖူးကွမှာပါ။အိန်ဒိယနိုငျငံရှိ Mr. India Hacker အမညျရှိ YouTuber အမြိုးသားတဈဦးဟာ Ghost Rider ရုပျရှငျဇာတျကားကိုအတုခိုးပွီး မကွောကျမလနျ့နဲ့ သူ့ရဲ့မျောတျောဆိုငျကယျအား တမငျ မီးလောငျအောငျလုပျခဲ့ပါတယျ။ဒီဗီဒီယိုဟာ likes ၅၀၀,၀၀၀ ကြျောရရှိခဲ့ပမေဲ့ အန်တရာယျမြားတဲ့ သူတို့ရဲ့လုပျရပျတှကေိုမကွိုကျတဲ့လူအရအေတှကျလညျး ၁၆၀၀၀ ကြျောတိုးမြားလာခဲ့ပါတယျ။ဒီ YouTuber ရဲ့လှုပျရှားမှုဟာ ၂၀၀၇ ခုနှဈကထှကျရှိခဲ့တဲ့ Ghost Rider ရုပျရှငျဇာတျကားထဲက Nicholas အဖွဈပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့စိတျကူးယဉျဇာတျကောငျကို ပွနျလညျတုပထားတာပါ။
Nicholas ဟာလူ့အရိုးစုတဈစုရဲ့ပုံသဏ်ဍာနျနဲ့ မီးလောငျနတေဲ့ခန်ဓာကိုယျဖွငျ့ မီးလောငျနတေဲ့ ဂန်ထဝငျ မျောတျောဆိုငျကယျကို စီးနငျးခဲ့တာပါ။Mr. Indian Hacker ဟာ တနျဖိုးကွီးပေးရလောကျမယျ့ သူ့ရဲ့Pulsar 220 မျောတျောဆိုငျကယျရဲ့ဘီးတာယာကို အဝတျစနဲ့ပတျပွီး အဝတျစကိုဓာတျဆီတှလေောငျးခပြဈခဲ့ပါတယျ။သူ ဆိုငျကယျမောငျးနစေဉျအတှငျး Ghost Rider ရုပျရှငျဇာတျကားမှာတှရေ့တဲ့အတိုငျး တကယျလညျး သူ့ရဲ့ဆိုငျကယျဘီးမှာ မီးတှတေဟုနျးဟုနျးတောကျလောငျနခေဲ့ပါတယျ။
Mr. Indian Hacker ဟာ သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုဟာ ဖြျောဖွဖေို့သကျသကျသာရညျရှယျပွီး ဒီဗီဒီယိုလုပျဆောငျမှုအားလုံးက လုံခွုံစိတျခရြတဲ့နရော၊ပွီးပွညျ့စုံတဲ့စကျကိရိယာတှနေဲ့သာပွုလုပျထားကွောငျး သတိပေးခဲ့ပါတယျ။Mr. Indian Hacker က အိမျ၊ကြောငျး ဒါမှမဟုတျ အခွားဘယျနရောမှာမဆို သူ့လို Ghost Rider ကိုလိုကျမတုပဖို့ လူအမြားကိုတောငျးဆိုခဲ့ပါသေးတယျ။ဒီဗီဒီယိုရိုကျကူးနတေုနျး ဘယျသူမှထိခိုကျဒဏျရာမရရှိခဲ့ဘူးလို့ Mr. Indian Hacker ကထပျမံဖွကွေားခဲ့ပါသေးတယျ။
Posted on November 25, 2020 November 25, 2020 Author Jasmine JasmineCategories ENTERTAINMENTLeaveacomment on Ghost Rider ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲကလို ဆိုင်ကယ်ကိုမီးရှို့ပစ်ပြီး လက်တွေ့မောင်းနှင်ပြခဲ့တဲ့ အမျိုးသား (ရုပ်သံ)
မနက်ခင်းကော်ဖီပူပူလေးနဲ့တောတောင်ရှုခင်းအလှကိုခံစားကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ ချောက်ကမ်းပါးဘေးမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့တည်းခိုခန်း (ရုပ်သံ)
Colombia နိုင်ငံ Antioquiaမြို့ရဲ့ Abejorral ကျေးလက်ဒေသရှိဧရာမကျောက်ဆောင်တုံးကြီးပေါ်က ကော်ဖီရှုခင်းလို့လူသိများတဲ့ La Casa en el Aire (‘The House in the air’) အမည်ရှိသစ်သားဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီးအမိုးဖြူနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အိမ်ဟာ မြေပြင်အထက်မီတာ ၃၀ ခန့်မှာရှိတဲ့ချောက်ကမ်းပါးပေါ်မှာ တည်ရှိပါတယ်။La Casa en el Aire ကို သံမဏိဝါယာကြိုးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားပြီး ချောက်ကမ်းပါးကိုဆန့်ကျင်ထားတဲ့ရှည်လျားတဲ့သစ်သားတိုင်ကြီးတစ်ခုနဲ့တည်ဆောက်ထားတာပါ။La Casa en el Aire ဟာ မြေမျက်နှာပြင်အထက်မီတာ ၂၀ ခန့်၊ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်မီတာ ၂၅၀၀ ခန့်မှာတည်ရှိတာပါ။ချောက်ကမ်းပါးမျက်နှာပြင်တစ်လျှောက်ကိုဆွဲထားတဲ့တံတားမှ ခရီးသည်တွေကို တောင်ပေါ်တောင်အောက် သယ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် ခိုင်ခံ့တဲ့သံကြိုးဆွဲယာဉ်ကိုပါ ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။
La Casa en el Aire အိမ်ကို Nilton López အမည်ရှိတဲ့တောင်တက်သမားတစ်ဦးက တီထွင်ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့တာပါ။Niltonက ဒီထူးဆန်းတဲ့တည်းခိုခန်းကိုတည်ဆောက်ရခြင်းက သူ့ရဲ့အိမ်မက်ဟောင်းကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့လို့ဆိုထားပါတယ်။သူ့တီထွင်မှုက ရေရှည်တည်တံ့နေပြီးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း နဲ့ အမှိုက်အားလုံးကိုလည်းစုဆောင်းပြီး Medellin သို့ပို့ဆောင်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် သူအတော်လေး စိတ်ချမ်းသာနေရပါတယ်တဲ့။
ဧရာမကျောက်တုံးကြီးပေါ်ကတည်ဆောက်ထားတဲ့အခန်းမှာ အနားယူ၊တည်းခိုနိုင်တဲ့အပြင် La Casa en el Aire ရဲ့ခရီးသွားဧည့်သည်တွေအတွက် အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလည်း ပါဝင်ပြီး အခန်းထဲကနေ ခုန်ထွက်တာ ဒါမှမဟုတ် အခန်းအထက်ကသံမဏိကြိုးတွေပေါ်မှာ တပ်ထားတဲ့ပုခက်ထဲမှာ တစ်ညတာအိပ်စက်နိုင်တာပါဘဲ။La Casa en el Aire က Abejorralကျေးလက်ဒေသရဲ့ဝေးလံတဲ့နေရာမှာတည်ရှိပြီး အစားအစာကိုအလွယ်တကူမရရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် အကယ်လို့ သွားရောက်လည်ပတ်ချင်ရင် ခရီးသွားဧည့်သည်တွေအနေနဲ့ ကြာရှည်ခံအစားအစာတွေ (ခြောက်သွေ့တဲ့ပေါင်မုန့်၊ cookies စတာတွေ) အပြင် ရေ ၅ လီတာဘူးကိုလည်းယူလာဖို့ တိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်။
Colombia နိုငျငံ Antioquiaမွို့ရဲ့ Abejorral ကြေးလကျဒသေရှိဧရာမကြောကျဆောငျတုံးကွီးပျေါက ကျောဖီရှုခငျးလို့လူသိမြားတဲ့ La Casa en el Aire (‘The House in the air’) အမညျရှိသဈသားဖွငျ့တညျဆောကျထားပွီးအမိုးဖွူနဲ့ပွုလုပျထားတဲ့အိမျဟာ မွပွေငျအထကျမီတာ ၃၀ ခနျ့မှာရှိတဲ့ခြောကျကမျးပါးပျေါမှာ တညျရှိပါတယျ။La Casa en el Aire ကို သံမဏိဝါယာကွိုးတှနေဲ့ခြိတျဆကျထားပွီး ခြောကျကမျးပါးကိုဆနျ့ကငျြထားတဲ့ရှညျလြားတဲ့သဈသားတိုငျကွီးတဈခုနဲ့တညျဆောကျထားတာပါ။La Casa en el Aire ဟာ မွမေကျြနှာပွငျအထကျမီတာ ၂၀ ခနျ့၊ ပငျလယျရမေကျြနှာပွငျအထကျမီတာ ၂၅၀၀ ခနျ့မှာတညျရှိတာပါ။ခြောကျကမျးပါးမကျြနှာပွငျတဈလြှောကျကိုဆှဲထားတဲ့တံတားမှ ခရီးသညျတှကေို တောငျပျေါတောငျအောကျ သယျဆောငျနိုငျဖို့အတှကျ ခိုငျခံ့တဲ့သံကွိုးဆှဲယာဉျကိုပါ ခြိတျဆကျထားပါတယျ။
La Casa en el Aire အိမျကို Nilton López အမညျရှိတဲ့တောငျတကျသမားတဈဦးက တီထှငျဆောကျလုပျပေးခဲ့တာပါ။Niltonက ဒီထူးဆနျးတဲ့တညျးခိုခနျးကိုတညျဆောကျရခွငျးက သူ့ရဲ့အိမျမကျဟောငျးကိုအကောငျအထညျဖျောနိုငျဖို့လို့ဆိုထားပါတယျ။သူ့တီထှငျမှုက ရရှေညျတညျတံ့နပွေီးလြှပျစဈဓာတျအားကိုနရေောငျခွညျစှမျးအငျဖွငျ့ထုတျလုပျနိုငျခွငျး နဲ့ အမှိုကျအားလုံးကိုလညျးစုဆောငျးပွီး Medellin သို့ပို့ဆောငျနိုငျခွငျးတို့ကွောငျ့ သူအတျောလေး စိတျခမျြးသာနရေပါတယျတဲ့။
ဧရာမကြောကျတုံးကွီးပျေါကတညျဆောကျထားတဲ့အခနျးမှာ အနားယူ၊တညျးခိုနိုငျတဲ့အပွငျ La Casa en el Aire ရဲ့ခရီးသှားဧညျ့သညျတှအေတှကျ အလှနျစိတျလှုပျရှားစရာကောငျးတဲ့လှုပျရှားမှုတှလေညျး ပါဝငျပွီး အခနျးထဲကနေ ခုနျထှကျတာ ဒါမှမဟုတျ အခနျးအထကျကသံမဏိကွိုးတှပေျေါမှာ တပျထားတဲ့ပုခကျထဲမှာ တဈညတာအိပျစကျနိုငျတာပါဘဲ။La Casa en el Aire က Abejorralကြေးလကျဒသေရဲ့ဝေးလံတဲ့နရောမှာတညျရှိပွီး အစားအစာကိုအလှယျတကူမရရှိနိုငျတဲ့အတှကျကွောငျ့ အကယျလို့ သှားရောကျလညျပတျခငျြရငျ ခရီးသှားဧညျ့သညျတှအေနနေဲ့ ကွာရှညျခံအစားအစာတှေ (ခွောကျသှတေဲ့ပေါငျမုနျ့၊ cookies စတာတှေ) အပွငျ ရေ ၅ လီတာဘူးကိုလညျးယူလာဖို့ တိုကျတှနျးထားပါသေးတယျ။
Posted on November 25, 2020 November 25, 2020 Author Jasmine JasmineCategories LIFESTYLELeaveacomment on မနက်ခင်းကော်ဖီပူပူလေးနဲ့တောတောင်ရှုခင်းအလှကိုခံစားကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ ချောက်ကမ်းပါးဘေးမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့တည်းခိုခန်း (ရုပ်သံ)
သခင်ဓာတ်ပုံရိုက်နေတုန်း ဘေးကသူငယ်ချင်းကို အပေါ်ကနေသိုင်းဖက်ရင်း ချစ်ဖို့ကောင်းအောင် pose ပေးတတ်တဲ့ ခွေးလေး (ရုပ်သံ)
ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးခွေးနှစ်ကောင်ဟာ သူတို့ကိုဓာတ်ပုံရိုက်နေတုန်း ဘယ်လိုposeပေးရမယ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းတုံ့ပြန်ပြသခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုထဲအရ ဂျာမနီနိုင်ငံ Hamgbargမြို့ဆောင်းရာသီသစ်တောလမ်းရှိအညိုရောင်သစ်ရွက်တွေအကြားက စောင်အဖြူကိုက်ထားတဲ့၂နှစ်အရွယ် Knutအမည်ရှိတဲ့ခွေးလေးဟာ သူ့သခင်Antoniaက ဓာတ်ပုံရိုက်နေတုန်း သူ့ရဲ့အဖော်ဝက်အူချောင်းခွေး Pauliလေးကို အပေါ်ကနေသိုင်းဖက်ပေးရင်းနှစ်ကောင်သား ပြုံးနေခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ ၁၉ရက်နေ့ကတင်ခဲ့တဲ့အဆိုပါဗီဒီယိုဟာ လူသိများသွားခဲ့ပြီး လူအများက Knutနဲ့Pauliလေးတို့အကြား ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကို သဘောကျနေခဲ့ကြရပါတယ်။
“အဲ့ဟာလေးက ငါ့ကိုပြုံးသွားစေတယ်၊Knutက ဥာဏ်ကောင်းတဲ့ကောင်လေးဘဲ သူ့ရဲ့လှည့်ကွက်ကို သဘောကျတယ်”လို့လူအများက ဆိုထားကြပါတယ်။Knutလေးကို သခင်ဖြစ်တဲ့Antoniaက Cyprus နိုင်ငံရှိ အခြားခွေးအကောင်၄၀ကျော်နဲ့အတူသဂြိုလ်တော့မယ့်သူ့ကို ကယ်တင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး သူ လေးလအရွယ်ကတည်းက မွေးစားခဲ့တာပါ။၂၀၁၈ခုနှစ် ဩဂုတ်လမှာ မွေးတဲ့Pauliကိုတော့ Antoniaရဲ့အမေ Sylviaက Hungaryနိုင်ငံမှမွေးစားခဲ့တာပါ။
ကောငျးကောငျးမှနျမှနျလကေ့ငျြ့ပေးထားတဲ့ကယျဆယျရေးခှေးနှဈကောငျဟာ သူတို့ကိုဓာတျပုံရိုကျနတေုနျး ဘယျလိုposeပေးရမယျဆိုတာကို ကောငျးကောငျးတုံ့ပွနျပွသခဲ့ပါတယျ။ဗီဒီယိုထဲအရ ဂြာမနီနိုငျငံ Hamgbargမွို့ဆောငျးရာသီသဈတောလမျးရှိအညိုရောငျသဈရှကျတှအေကွားက စောငျအဖွူကိုကျထားတဲ့၂နှဈအရှယျ Knutအမညျရှိတဲ့ခှေးလေးဟာ သူ့သခငျAntoniaက ဓာတျပုံရိုကျနတေုနျး သူ့ရဲ့အဖျောဝကျအူခြောငျးခှေး Pauliလေးကို အပျေါကနသေိုငျးဖကျပေးရငျးနှဈကောငျသား ပွုံးနခေဲ့ပါတယျ။ပွီးခဲ့တဲ့နိုဝငျဘာ ၁၉ရကျနကေ့တငျခဲ့တဲ့အဆိုပါဗီဒီယိုဟာ လူသိမြားသှားခဲ့ပွီး လူအမြားက Knutနဲ့Pauliလေးတို့အကွား ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ဆကျဆံရေးကို သဘောကနြခေဲ့ကွရပါတယျ။
“အဲ့ဟာလေးက ငါ့ကိုပွုံးသှားစတေယျ၊Knutက ဉာဏျကောငျးတဲ့ကောငျလေးဘဲ သူ့ရဲ့လှညျ့ကှကျကို သဘောကတြယျ”လို့လူအမြားက ဆိုထားကွပါတယျ။Knutလေးကို သခငျဖွဈတဲ့Antoniaက Cyprus နိုငျငံရှိ အခွားခှေးအကောငျ၄၀ကြျောနဲ့အတူသဂွိုလျတော့မယျ့သူ့ကို ကယျတငျပေးနိုငျခဲ့ပွီး သူ လေးလအရှယျကတညျးက မှေးစားခဲ့တာပါ။၂၀၁၈ခုနှဈ ဩဂုတျလမှာ မှေးတဲ့Pauliကိုတော့ Antoniaရဲ့အမေ Sylviaက Hungaryနိုငျငံမှမှေးစားခဲ့တာပါ။
Posted on November 25, 2020 November 25, 2020 Author Jasmine JasmineCategories LIFESTYLELeaveacomment on သခင်ဓာတ်ပုံရိုက်နေတုန်း ဘေးကသူငယ်ချင်းကို အပေါ်ကနေသိုင်းဖက်ရင်း ချစ်ဖို့ကောင်းအောင် pose ပေးတတ်တဲ့ ခွေးလေး (ရုပ်သံ)
ကိုဗစ်ကာလအတွင်း တစ်နေ့တာဖြတ်သန်းနေထိုင်နေရတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှလူတွေရဲ့ ပုံရိပ်များ
ကျွန်တော်တို့ဟာ ၂၀၁၉အကုန်၂၀၂၀အစပိုင်းလောက်ကတည်းက COVID-19 ကြောင့် Lockdown ကာလအတွင်း အိမ်မှာဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ပျင်းရိစရာကောင်းတဲ့တစ်နေ့တာကို နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကုန်ဆုံးနေခဲ့ရတာပါ။အခုဓာတ်ပုံတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လက စတင်ရိုက်ကူးထားခဲ့ပြီး ရှုပ်ထွေးတဲ့စိတ်ခံစားချက်၊အိမ်တွင်းနေထိုင်ခြင်း၊ပျင်းရိတဲ့တစ်နေ့တာ စတဲ့လူသားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့Lockdown ကာလအတွင်း စိတ်ကျဉ်းကျပ်ဖိစီးမှုတွေကို ကမ္ဘာ့အနှံ့ရှိထူးချွန်ဓာတ်ပုံပညာရှင်တွေက နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ကြတာပါ။ဒီတော့ ကပ်ရောဂါကြီးအတွင်း ကမ္ဘာ့တစ်ဝှမ်းကလူတွေရဲ့တစ်နေ့တာဘယ်လိုကုန်ဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြသနေတဲ့ဓာတ်ပုံအချို့ကို စာဖတ်သူတို့အဖို့ မျှဝေခဲ့လိုက်ပါတယ်။
ကြှနျတျောတို့ဟာ ၂၀၁၉အကုနျ၂၀၂၀အစပိုငျးလောကျကတညျးက COVID-19 ကွောငျ့ Lockdown ကာလအတှငျး အိမျမှာဘဲ ကိုယျ့ရဲ့ပငျြးရိစရာကောငျးတဲ့တဈနတေ့ာကို နစေ့ဉျနတေို့ငျး ကုနျဆုံးနခေဲ့ရတာပါ။အခုဓာတျပုံတှကေို ပွီးခဲ့တဲ့ဇှနျလက စတငျရိုကျကူးထားခဲ့ပွီး ရှုပျထှေးတဲ့စိတျခံစားခကျြ၊အိမျတှငျးနထေိုငျခွငျး၊ပငျြးရိတဲ့တဈနတေ့ာ စတဲ့လူသားတှကွေုံတှနေ့ရေတဲ့Lockdown ကာလအတှငျး စိတျကဉျြးကပျြဖိစီးမှုတှကေို ကမ်ဘာ့အနှံ့ရှိထူးခြှနျဓာတျပုံပညာရှငျတှကေ နညျးအမြိုးမြိုးဖွငျ့ မှတျတမျးတငျထားခဲ့ကွတာပါ။ဒီတော့ ကပျရောဂါကွီးအတှငျး ကမ်ဘာ့တဈဝှမျးကလူတှရေဲ့တဈနတေ့ာဘယျလိုကုနျဆုံးသှားခဲ့ရတဲ့ပုံရိပျတှကေိုပွသနတေဲ့ဓာတျပုံအခြို့ကို စာဖတျသူတို့အဖို့ မြှဝခေဲ့လိုကျပါတယျ။
Posted on November 25, 2020 November 25, 2020 Author Jasmine JasmineCategories LIFESTYLELeaveacomment on ကိုဗစ်ကာလအတွင်း တစ်နေ့တာဖြတ်သန်းနေထိုင်နေရတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှလူတွေရဲ့ ပုံရိပ်များ
McDonald ဆိုင်အပြင်ဘက်မှာဖြာကျနေတဲ့ အလင်းရောင်ကိုအားကိုးပြီး အိမ်စာလုပ်နေခဲ့တဲ့ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ကလေးငယ်
အခုသတင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့၂၀၁၉အစောပိုင်းလောက်ကသတင်းဖြစ်ပြီး inspireဖြစ်စေဖို့ဖော်ပြပေးလိုက်တာပါ။ကလေးတော်တော်များများဟာ အိမ်စာလုပ်ဖို့မဝံ့မရဲဖြစ်ကြပြီး အိမ်စာလုပ်ဖို့လည်း ရှောင်ဖယ်နေတတ်ကြသလိုကျောင်းကိုလုံးဝမသွားချင်ကြတဲ့ကလေးတွေက onlineမှာအချိန်ဖြုန်းခြင်း သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းတွေလုပ်တတ်ကြပါတယ်။အဲဒီကလေးတွေက သူတို့ဘယ်လောက်ကံကောင်းတယ်ဆိုတာကိုမသိကြပါဘူး။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Mandaue မြို့က ရည်မှန်းချက်ကြီးတဲ့Daniel Cabrera အမည်ရှိအသက်၉ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ McDonald စားသောက်ဆိုင်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာဖြာကျနေတဲ့အလင်းရောင်နဲ့ ယာယီခုံတန်းရှည်ကိုသုံးပြီး စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ စာလေ့လာနေခဲ့ပါတယ်။သူ့အိမ်စာလုပ်နေတုန်း တစ်ယောက်တည်းလမ်းလျှောက်နေတဲ့Joyce Torrefranca အမည်ရှိဆေးကျောင်းသူတစ်ဦးက တွေ့သွားခဲ့ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့် သူမဓာတ်ပုံရိုက်ကာ Facebook မှာ မျှဝေလိုက်ပြီးနောက် လျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး Netizen တွေက Danielရဲ့ဇွဲလုံ့လကိုသဘောကျသွားခဲ့ကြပါတယ်။
Torrefranca က လူအများရဲ့မေတ္တာကိုရခဲ့တာကြောင့် “ရိုးရှင်းတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံက ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ဖြစ်စေနိုင်တာကို ကျွန်မမသိခဲ့ဘူး။”လို့ဆိုကာ ကျေးဇူးတင်ခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်ပုံဝေမျှပေးခဲ့အတွက်ကြောင့် သူမဟာ Danielရဲ့အိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ပေါ်အောင် ကူညီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သိပ်မကြာခင်မှာပဲ လူတွေက ကျဉ်းကျုတ်ပြီးနံရံမရှိတဲ့စားသောက်ခန်းထဲမှာနေထိုင်တဲ့ တတိယတန်းကျောင်းသားDaniel တို့မိသားစုကို တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့အိမ်ဟောင်းကိုမီးရှို့ပစ်တဲ့ အဖေဖြစ်သူကထောင်ထဲမှာဆုံးသွားခဲ့ပြီး မိသားစုကဆင်းရဲနွမ်းပါးပေမဲ့ Daniel က စာလေ့လာခြင်းကိုမရပ်တန့်ခဲ့ပါဘူး။
အတန်းဖော်တွေလမ်းဘေးမှာကစားနေတုန်း Daniel ဟာ McDonald ဆိုင်ရဲ့အလင်းရောင်ကိုအသုံးပြုပြီး စာကြိုးစားလေ့လာနေခဲ့တာပါ။ခဲတံ၂ချောင်းတည်းသာရှိတဲ့Daniel ဟာ အခြားကျောင်းသားကသူ့ရဲ့ခဲတံကိုခိုးယူခဲ့တာကြောင့် တစ်နေ့ ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ရဲတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အိပ်မက်မက်ခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေက Daniel ရဲ့ပညာရေးရန်ပုံငွေအတွက် ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုကိုထောင်ပေးခဲ့ပြီး သူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာ အရာထင်သွားခဲ့ပါတယ်။လှူဒါန်းမှုမှာ PHP ၂၂,၉၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၇ ခန့်)ရှိခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ကျောင်းလိုအပ်ချက်တွေအတွက် PHP ၅၀,၀၀၀(ဒေါ်လာ ၁၁၀၇ ခန့်)ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ ဘဝရဲ့ အကြီးမြတ်ဆုံးသင်ခန်းစာတွေကို ကျော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆီမှမဟုတ်ဘဲ Danielလို လုံလဝီရိယကောင်းတဲ့လူတွေဆီကနေလည်း သင်ယူလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အခုသတငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့၂၀၁၉အစောပိုငျးလောကျကသတငျးဖွဈပွီး inspireဖွဈစဖေို့ဖျောပွပေးလိုကျတာပါ။ကလေးတျောတျောမြားမြားဟာ အိမျစာလုပျဖို့မဝံ့မရဲဖွဈကွပွီး အိမျစာလုပျဖို့လညျး ရှောငျဖယျနတေတျကွသလိုကြောငျးကိုလုံးဝမသှားခငျြကွတဲ့ကလေးတှကေ onlineမှာအခြိနျဖွုနျးခွငျး သို့မဟုတျ ဗီဒီယိုဂိမျးကစားခွငျးတှလေုပျတတျကွပါတယျ။အဲဒီကလေးတှကေ သူတို့ဘယျလောကျကံကောငျးတယျဆိုတာကိုမသိကွပါဘူး။ဖိလဈပိုငျနိုငျငံ Mandaue မွို့က ရညျမှနျးခကျြကွီးတဲ့Daniel Cabrera အမညျရှိအသကျ၉ နှဈအရှယျကောငျလေးတဈယောကျဟာ McDonald စားသောကျဆိုငျရဲ့အပွငျဘကျမှာဖွာကနြတေဲ့အလငျးရောငျနဲ့ ယာယီခုံတနျးရှညျကိုသုံးပွီး စိတျရှညျရှညျနဲ့ စာလလေ့ာနခေဲ့ပါတယျ။သူ့အိမျစာလုပျနတေုနျး တဈယောကျတညျးလမျးလြှောကျနတေဲ့Joyce Torrefranca အမညျရှိဆေးကြောငျးသူတဈဦးက တှသှေ့ားခဲ့ပွီး စိတျလှုပျရှားစရာကောငျးတဲ့မွငျကှငျးကွောငျ့ သူမဓာတျပုံရိုကျကာ Facebook မှာ မြှဝလေိုကျပွီးနောကျ လငျြမွနျစှာ ပြံ့နှံ့သှားခဲ့ပွီး Netizen တှကေ Danielရဲ့ဇှဲလုံ့လကိုသဘောကသြှားခဲ့ကွပါတယျ။
Torrefranca က လူအမြားရဲ့မတ်ေတာကိုရခဲ့တာကွောငျ့ “ရိုးရှငျးတဲ့ဓာတျပုံတဈပုံက ကွီးမားတဲ့ခွားနားခကျြဖွဈစနေိုငျတာကို ကြှနျမမသိခဲ့ဘူး။”လို့ဆိုကာ ကြေးဇူးတငျခဲ့ပါတယျ။ဓာတျပုံဝမြှေပေးခဲ့အတှကျကွောငျ့ သူမဟာ Danielရဲ့အိပျမကျကိုအကောငျအထညျပျေါအောငျ ကူညီနိုငျခဲ့ပါတယျ။သိပျမကွာခငျမှာပဲ လူတှကေ ကဉျြးကြုတျပွီးနံရံမရှိတဲ့စားသောကျခနျးထဲမှာနထေိုငျတဲ့ တတိယတနျးကြောငျးသားDaniel တို့မိသားစုကို တှရှေိ့ခဲ့ကွပါတယျ။သူတို့အိမျဟောငျးကိုမီးရှို့ပဈတဲ့ အဖဖွေဈသူကထောငျထဲမှာဆုံးသှားခဲ့ပွီး မိသားစုကဆငျးရဲနှမျးပါးပမေဲ့ Daniel က စာလလေ့ာခွငျးကိုမရပျတနျ့ခဲ့ပါဘူး။
အတနျးဖျောတှလေမျးဘေးမှာကစားနတေုနျး Daniel ဟာ McDonald ဆိုငျရဲ့အလငျးရောငျကိုအသုံးပွုပွီး စာကွိုးစားလလေ့ာနခေဲ့တာပါ။ခဲတံ၂ခြောငျးတညျးသာရှိတဲ့Daniel ဟာ အခွားကြောငျးသားကသူ့ရဲ့ခဲတံကိုခိုးယူခဲ့တာကွောငျ့ တဈနေ့ ဆရာဝနျ ဒါမှမဟုတျ ရဲတဈယောကျဖွဈဖို့ အိပျမကျမကျခဲ့ပါတယျ။တာဝနျရှိတဲ့နိုငျငံသားတှကေ Daniel ရဲ့ပညာရေးရနျပုံငှအေတှကျ ဖောငျဒေးရှငျးတဈခုကိုထောငျပေးခဲ့ပွီး သူတို့ရဲ့ကွိုးပမျးမှုတှဟော အရာထငျသှားခဲ့ပါတယျ။လှူဒါနျးမှုမှာ PHP ၂၂,၉၀၀ (အမရေိကနျဒျေါလာ ၅၀၇ ခနျ့)ရှိခဲ့ပွီး သူ့ရဲ့ကြောငျးလိုအပျခကျြတှအေတှကျ PHP ၅၀,၀၀၀(ဒျေါလာ ၁၁၀၇ ခနျ့)ရရှိခဲ့ပါတယျ။ဒီတော့ ဘဝရဲ့ အကွီးမွတျဆုံးသငျခနျးစာတှကေို ကြျောကွားတဲ့ပုဂ်ဂိုလျတှဆေီမှမဟုတျဘဲ Danielလို လုံလဝီရိယကောငျးတဲ့လူတှဆေီကနလေညျး သငျယူလလေ့ာနိုငျပါတယျ။
Posted on November 24, 2020 November 24, 2020 Author Jasmine JasmineCategories LIFESTYLELeaveacomment on McDonald ဆိုင်အပြင်ဘက်မှာဖြာကျနေတဲ့ အလင်းရောင်ကိုအားကိုးပြီး အိမ်စာလုပ်နေခဲ့တဲ့ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ကလေးငယ်
Posted on November 24, 2020 November 24, 2020 Author Jasmine JasmineCategories WORLD NEWSLeaveacomment on စံပြဝန်ထမ်းတစ်ဦးအဖြစ် သက်သေပြနိုင်ဖို့ အိမ်သာခွက်ထဲကရေကိုတစ်ခါတည်းအကုန်မော့သောက်ပြခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး (ရုပ်သံ)
နှင်းပေါက်လေးတွေနဲ့ တောက်ပနေတဲ့ဆောင်းရာသီမှာ သမီးလေးတွေအတွက် အလှပဆုံး အမှတ်တရ​တွေဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ မိခင်
“မှော်အတတ်ပညာက ကျွန်မတို့ကိုဘယ်တော့မှ မငြီးငွေ့သွားစေခဲ့ဘူး။မှော်အဆန်ဆုံး ရာသီက ဆောင်းရာသီပါ။အရာအားလုံးအေးခဲနေပြီး နှင်းပေါက်လေးတွေကလည်း တလက်လက် တောက်ပနေတယ်။ရေခဲပုံဆောင်ခဲတွေနဲ့ကြည်လင်အေးစိမ့်တဲ့လေထုက ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မသမီးလေးတွေကို ကြည်စယ်နေတယ်။ကျွန်မတို့က ပုံပြင်တွေကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြတာကြောင့် သမီးအကြီးဆုံးက သူမရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို သုံးပြီး ဒဏ္ဍာရီနတ်သမီးပုံပြင်မှာ ထည့်ပေးဖို့ ပူဆာနေတယ်။ဒီတော့ ကျွန်မလည်း စိတ်ကူးပေါက်သလိုလုပ်ပေးလိုက်တယ်။ဒါကဆောင်းရာသီ Wonderland မှာရှိတဲ့ ကျွန်မသမီးလေးတွေပေါ့။” လို့ဆိုရင်း Maria Lindbergလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးကတော့ ဒီနှစ်ဆောင်းရာသီရဲ့အလှတရားနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့သူမသမီးလေးတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို ဝေမျှထားခဲ့ပါတယ်။
“မှျောအတတျပညာက ကြှနျမတို့ကိုဘယျတော့မှ မငွီးငှသှေ့ားစခေဲ့ဘူး။မှျောအဆနျဆုံး ရာသီက ဆောငျးရာသီပါ။အရာအားလုံးအေးခဲနပွေီး နှငျးပေါကျလေးတှကေလညျး တလကျလကျ တောကျပနတေယျ။ရခေဲပုံဆောငျခဲတှနေဲ့ကွညျလငျအေးစိမျ့တဲ့လထေုက ကြှနျမနဲ့ ကြှနျမသမီးလေးတှကေို ကွညျစယျနတေယျ။ကြှနျမတို့က ပုံပွငျတှကေို ကွိုကျနှဈသကျကွတာကွောငျ့ သမီးအကွီးဆုံးက သူမရဲ့ဓာတျပုံတှကေို သုံးပွီး ဒဏ်ဍာရီနတျသမီးပုံပွငျမှာ ထညျ့ပေးဖို့ ပူဆာနတေယျ။ဒီတော့ ကြှနျမလညျး စိတျကူးပေါကျသလိုလုပျပေးလိုကျတယျ။ဒါကဆောငျးရာသီ Wonderland မှာရှိတဲ့ ကြှနျမသမီးလေးတှပေေါ့။” လို့ဆိုရငျး Maria Lindbergလို့ချေါတဲ့အမြိုးသမီးကတော့ ဒီနှဈဆောငျးရာသီရဲ့အလှတရားနဲ့ ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့သူမသမီးလေးတို့ရဲ့ဓာတျပုံတှကေို ဝမြှေထားခဲ့ပါတယျ။
Posted on November 24, 2020 November 24, 2020 Author Jasmine JasmineCategories LIFESTYLELeaveacomment on နှင်းပေါက်လေးတွေနဲ့ တောက်ပနေတဲ့ဆောင်းရာသီမှာ သမီးလေးတွေအတွက် အလှပဆုံး အမှတ်တရ​တွေဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ မိခင်
အက်ကြောင်းတွေအပြည့်နဲ့ဆိုပေမဲ့ အသုံးပြုလို့ရသေးတဲ့ ထူးခြားဗီဒိုဒီဇိုင်းတွေကို ဖန်တီးပုံဖော်ပြခဲ့သူ
ပျက်စီးသွားတဲ့ ဒါမှမဟုတ် အက်ကွဲသွားတဲ့ပရိဘောဂတွေဟာ Henk Verhoeffအမည်ရှိတဲ့အမျိုးသားရဲ့ထူးခြားဆန်းကြယ်တဲ့ဗီဒိုတွေကြောင့်သာမဟုတ်ရင် သူတို့ကစံပြအရာတွေမဟုတ်ပါဘူး။New Zealand နိုင်ငံ Aucklandမြို့က အငြိမ်းစားလယ်သမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့Henkဟာ သမီးဖြစ်သူက Facebook ပေါ်သူ့ရဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့သစ်သားဗီဒိုတွေ မျှဝေခဲ့ပြီး နောက်နေ့မှာဘဲ ချက်ချင်းလူသိများသွားခဲ့ပါတယ်။Henkက အဆိုပါဗီဒိုတွေကို ဒီဂျစ်ထယ်နဲ့ပြောင်းလဲကြည့်ပေမဲ့ သူကိုယ်တိုင်လက်နဲ့ဘဲ ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး တီထွင်ပုံဖော်ခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင် သူ့တီထွင်မှုကို ပိုထင်ရှားစေတာက ဗီဒိုတွေဟာ ထင်ထင်ရှားရှားချို့ယွင်းချက်တွေရှိနေပေမဲ့ ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်သေးတာကိုပါ။
အံဆွဲတွေအားလုံးက ဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရသလို ပစ္စည်းတွေလည်းထဲလို့ရနေပါသေးတယ်။Henkက ထူးဆန်းတဲ့ပရိဘောဂတွေ ဆိုင်မှာမမြင်ဖူးသေးတဲ့ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေကို တီထွင်ရတာကို ကြိုက်ပြီး အဆိုပါဗီဒိုတွေကို နာရီပေါင်း ၈၀ကနေ၁၀၀အထိအချိန်ယူပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ အဆိုပါနတ်သမီးပုံပြင်ဆန်တဲ့ဗီဒီတွေဟာ Henkက ရောင်းချဖို့လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။”ငါသူတို့ကို ရောင်းချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲ စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက် ဖန်တီးခဲ့တာ ဒါပေမဲ့ငါ့အခြေအနေမကောင်းလာခဲ့ရင်တော့ သူတို့ကို လေလံတင်ပြီးအကုန်ထုတ်ရောင်းမှာပါ ငါ့မိန်းမကလွှဲရင်ပေါ့”လို့ Henkကဟာသနှောပြီးဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။
Henkရဲ့သမီးLindaက ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က သူ့ရဲ့ဗီဒိုတွေကို ထုတ်ပြပေးခဲ့ပြီး တုံ့ပြန်ချက်တွေကအရမ်းကောင်းနေတာကြောင့် Henkက ငါ့ဗီဒိုအကြောင်းကို ဘာလို့လူသိများသွားတာကို သေချာမသိခဲ့ဘူး တကယ်တော့ ငါ့သမီးကpostတင်ပေးခဲ့တာကို ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်လို့ မမျှော်လင့်ထားပါဘူး ပျော်လွန်းလို့ မိုးပေါ်တောင်ပျံတက်သွားတယ်လို့လည်း ဆိုထားပါသေးတယ်။
ပကျြစီးသှားတဲ့ ဒါမှမဟုတျ အကျကှဲသှားတဲ့ပရိဘောဂတှဟော Henk Verhoeffအမညျရှိတဲ့အမြိုးသားရဲ့ထူးခွားဆနျးကွယျတဲ့ဗီဒိုတှကွေောငျ့သာမဟုတျရငျ သူတို့ကစံပွအရာတှမေဟုတျပါဘူး။New Zealand နိုငျငံ Aucklandမွို့က အငွိမျးစားလယျသမားတဈဦးဖွဈတဲ့Henkဟာ သမီးဖွဈသူက Facebook ပျေါသူ့ရဲ့အံ့ဩစရာကောငျးတဲ့သဈသားဗီဒိုတှေ မြှဝခေဲ့ပွီး နောကျနမှေ့ာဘဲ ခကျြခငျြးလူသိမြားသှားခဲ့ပါတယျ။Henkက အဆိုပါဗီဒိုတှကေို ဒီဂဈြထယျနဲ့ပွောငျးလဲကွညျ့ပမေဲ့ သူကိုယျတိုငျလကျနဲ့ဘဲ ဒီဇိုငျးဆှဲပွီး တီထှငျပုံဖျောခဲ့တာပါ။ဒါ့အပွငျ သူ့တီထှငျမှုကို ပိုထငျရှားစတောက ဗီဒိုတှဟော ထငျထငျရှားရှားခြို့ယှငျးခကျြတှရှေိနပေမေဲ့ ဆကျပွီးအလုပျလုပျနိုငျသေးတာကိုပါ။
အံဆှဲတှအေားလုံးက ဖှငျ့ပိတျလုပျလို့ရသလို ပစ်စညျးတှလေညျးထဲလို့ရနပေါသေးတယျ။Henkက ထူးဆနျးတဲ့ပရိဘောဂတှေ ဆိုငျမှာမမွငျဖူးသေးတဲ့ပရိဘောဂပစ်စညျးတှကေို တီထှငျရတာကို ကွိုကျပွီး အဆိုပါဗီဒိုတှကေို နာရီပေါငျး ၈၀ကနေ၁၀၀အထိအခြိနျယူပွုလုပျခဲ့ရပါတယျတဲ့။ဒါပမေဲ့ အဆိုပါနတျသမီးပုံပွငျဆနျတဲ့ဗီဒီတှဟော Henkက ရောငျးခဖြို့လုပျခဲ့တာမဟုတျပါဘူး။”ငါသူတို့ကို ရောငျးခငျြတဲ့ရညျရှယျခကျြမရှိဘဲ စဈမှနျတဲ့ခဈြခွငျးမတ်ေတာအတှကျ ဖနျတီးခဲ့တာ ဒါပမေဲ့ငါ့အခွအေနမေကောငျးလာခဲ့ရငျတော့ သူတို့ကို လလေံတငျပွီးအကုနျထုတျရောငျးမှာပါ ငါ့မိနျးမကလှဲရငျပေါ့”လို့ Henkကဟာသနှောပွီးဆိုခဲ့ပါသေးတယျ။
Henkရဲ့သမီးLindaက ပွီးခဲ့တဲ့အပတျက သူ့ရဲ့ဗီဒိုတှကေို ထုတျပွပေးခဲ့ပွီး တုံ့ပွနျခကျြတှကေအရမျးကောငျးနတောကွောငျ့ Henkက ငါ့ဗီဒိုအကွောငျးကို ဘာလို့လူသိမြားသှားတာကို သခြောမသိခဲ့ဘူး တကယျတော့ ငါ့သမီးကpostတငျပေးခဲ့တာကို ဒီလိုဖွဈသှားမယျလို့ မမြှျောလငျ့ထားပါဘူး ပြျောလှနျးလို့ မိုးပျေါတောငျပြံတကျသှားတယျလို့လညျး ဆိုထားပါသေးတယျ။
Posted on November 24, 2020 November 24, 2020 Author Jasmine JasmineCategories LIFESTYLELeaveacomment on အက်ကြောင်းတွေအပြည့်နဲ့ဆိုပေမဲ့ အသုံးပြုလို့ရသေးတဲ့ ထူးခြားဗီဒိုဒီဇိုင်းတွေကို ဖန်တီးပုံဖော်ပြခဲ့သူ
Posted on November 24, 2020 November 24, 2020 Author Jasmine JasmineCategories LIFESTYLELeaveacomment on ရောဂါကာလအတွင်းအပြင်ထွက်မလည်အောင် သားဖြစ်သူကို ထိပ်ပြောင်ဆံပင်ပုံစံညှပ်ပေးပြီး ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ဖခင်